बट्टाईको अण्डा खाँदा फाइदै-फाइदा – live 60media
यस्ता छन् फाइदाहरुः बट्टाईको अण्डामा पोषण तत्व एकदमै बढि हुन्छ । बट्टाईको अण्डामा भिटामिन ए, बी, डी र बी १२, लुटिन तथा जिएजेनथीन अधिकमात्रामा हुन्छ । यी भिटामिन आँखाका लागि एकदमै लाभदायक मानिन्छ ।
शरिरमा रहेको अनावश्यक टक्सिन निकाल्न पनि बट्टाईको अण्डा लाभदायक रहेको छ । बट्टाइको अण्डाले मृगौला, कलेजो र गलब्लाडर स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
बट्टाईको अन्डा कसरी खाने? साधारणतया: बट्टाईको अन्डा काँचो खाँदा राम्रो मानिछ, किनकी यसमा जति पोस्टिक तत्व काँचोमा हुन्छ, त्यति पाकेकोमा हुँदैन। काँचो अन्डा खाँदा खासै स्वाद नहुने हुँदा सुन्तला, आँप या भुइँकटहरको जुसमा फिटेर खाँदा राम्रो मानिन्छ तर अन्डा भने ताजा हुन जरुरी छ।
← नेपालकै मोटो ब्यक्ती, श्रीमती छिन यति पातली सुन्दर, यस्तो छ यो जोडीको माया
यो पढ्नुहोस् , तपाई अविवाहित हुनुहुन्छ भने मोटी केटीसँग बिवाह गर्न मनाही गर्नुहुने छैन,धेरै फाइदा छन् ! →